Portsgbọelu Eferela Ndị njem njem 19.362.135 na October | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulNdị njem njem 19.362.135 jere ozi na ọdụ ụgbọ elu na Ọktọba
09 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, General, Ụlọ elu, Ụzọ Awara Awara, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 0
ọdụ ụgbọ elu rụrụ ọrụ na Ọktọba
General Directorate of State ọdụ ụgbọ elu (DHMI), 2019 afọ nke ụgbọ elu October, mara ọkwa maka njem na ọnụ ọgụgụ ibu.
N'ihi ya, na Ọktọba; Ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu na-apụ ma na-apụ n'ọdụ ụgbọ elu bụ 72.488 maka ụgbọ elu ụgbọ elu na 69.174 maka ụgbọ elu mba ụwa. Mkpokọta njem ụgbọelu ruru 182.654 nwere oke gafere.
Na October, Turkey na-eje ozi ụlọ njem okporo ụzọ na ọdụ ụgbọelu gafee 8.443.307, mba njem okporo ụzọ bụ 10.905.965. Mkpokọta ngagharị njem na ndị njem na-agafe agafe bụ ihe emere ka 19.362.135.
Fregbọ elu ụgbọ mmiri (ibu, leta na akpa) okporo ụzọ; Ruo ọnwa Ọktọba, akwara 72.677 na ahịrị ime ụlọ na tọn 287.263 n'usoro mba ụwa ruru ngụkọta nke 359.940.
Ọnwa 10 (JANUARY-OCTOBER) AIRCRAFT, PASSENGER AND LOAD TRAFFIC
Dị ka njedebe nke Ọktọba, 2019; trafficgbọ elu na-aga ma site na ọdụ ụgbọ elu bụ 709.259 na ụgbọ elu ụgbọelu na 623.820 na ụgbọ elu mba ụwa. Ya mere, ngụkọta ụgbọ elu ruru 1.733.242 nwere oke gafere.
Turkey 84.874.916 nke mkpokọta anụ ụlọ njem okporo ụzọ na ọdụ ụgbọelu, ebe mba njem okporo ụzọ n'oge a nke 95.733.615 kpọmkwem n'ụzọ njem ọnụ na ngụkọta njem okporo ụzọ guzo 180.844.809.
Fregbọ elu ụgbọ mmiri (ibu, leta na akpa) okporo ụzọ; 699.137 tọn na ahịrị nke anụ ụlọ na tọn 2.152.675 na ahịrị mba ụwa.
OBIARA DARA ISTANBUL
N’ọnwa Ọktọba, ụgbọ elu 9.077 na ọdụ ụgbọ elu 28.870 gbadara wee gbada na ọdụ ụgbọ elu Istanbul na ngụkọta okporo ụzọ ghọrọ 37.947.
Mkpokọta njem njem 1.440.549, tinyere 4.777.434 na ahịrị ime ụlọ na 6.217.983 na ahịrị mba, ka amatapụtara.
N'ime oge Jenụwarị-Ọktọba, ụgbọ elu 2019 hụrụ na ọdụ ụgbọ elu Istanbul Atatürk, ebe ọrụ ụgbọ elu na ụgbọ njem na-aga n'ihu. N’ọdụ ụgbọ elu a, a na-enye ndị njem njem 132.946 n’oge Jenụwarị-Eprel ruo mgbe mmalite nke ọdụ ụgbọ elu Istanbul.
N’ọdụ ụgbọ elu Istanbul, ụgbọ elu 260.382 na njem ụgbọ elu 41.792.679 abanyela n’ime ọnwa iri.
Ya mere, ngụkọta ụgbọ elu 393.328 zuru oke na ọdụ ụgbọ elu abụọ a; E nyere ndị njem njem 57.865.213 ọrụ.
Ejirila ndị na-ahụ maka nde mmadụ 10 rụọ ọrụ na 54 MONTHS AT Centre TOURISM
Ọnụ ọgụgụ ndị njem jere ozi na 10 kwa ọnwa n'ọdụ ụgbọ elu dị na ebe nlegharị anya ebe okporo ụzọ ndị mba ọzọ dị elu eruola nde 54. NUMgbọ njem ndị njem 17.808.542 na ahịrị ụlọ, 35.975.236 na ahịrị mba ụwa; trafficgbọ elu ikuku bụ 134.761 na njem ụgbọ elu na 210.489 na ụgbọ elu mba ụwa.
10 data kwa ọnwa nke ọdụ ụgbọ elu anyị na mpaghara njem dị ka ndị a:
Ọdụ ụgbọ elu Izmir Adnan Menderes natara ọrụ 7.603.737 na ụgbọ elu ụgbọ elu, ọrụ ndị 3.033.339 na ụgbọ elu mba ụwa na ngụkọta nke ndị njem 10.637.076.
N’ọdụ ụgbọ elu Antalya, e nyere ndị njem njem 6.052.414 ngụkọta, gụnyere 27.427.192 anụ ụlọ na ndị njem 33.479.606 mba.
Na Muğla Dalaman Airport, ngụkọta njem 1.427.617 na-agafe njem, gụnyere 3.046.607 na ụgbọ elu ụlọ na 4.474.224 na ụgbọ elu mba ụwa, mezuru.
Ğgbọ elu Muğla Milas-Bodrum nwere ọnụ ọgụgụ ndị njem njem ụlọ 2.283.786 na ọnụ ọgụgụ ndị njem mba ụwa 1.878.739. E nyere ndị njem njem 4.162.525 ngụkọta.
Ọnụ ọgụgụ ndị njem njem nke mba na mba na ọdụ ụgbọ elu Gazipaşa Alanya bụ 440.988. Onu ogugu nke ndi njem biara rue 589.359.
DHMİ: X XUMUM nde ndị njem nọ na October DH
Ọdụ ụgbọ elu Istanbul 3 puku na ọnwa mbu nke 318 nke Afọ a İstanbul
Ụlọ ọrụ Konya YHT ga-ejere 3 nde njem njem kwa afọ
Ndị njem na 450 Million njem
Obodo Batman enwere onwe ya na 135 puku mmadụ nọ na Bayram
Minista Turhan: 'Nkezi nke 135 Mileage kwa Afọ…